कथित पीडित,पीडक र अधिकारधारी जो रमिते मात्र बनेनन् , यस्ता भाइरस सबैलाई कारबाही होस् - thenepalsuchana
“पोथि बास्न हुदैन” साँच्चै यो उखान टुक्का यतिबेला समय सान्दर्भिक भएको छ
सम्झना पौडेल	काठमाडौं	वैशाख २२, २०७८
परापुर्वकालमा बाउ बाजेले भन्ने गरेको उखान टुक्का यतिबेला मलाई याद आयो । “पोथि बास्न हुदैन” साँच्चै यो उखान टुक्का यतिबेला समय सान्दर्भिक भएको छ । कुरा गराैँ हाम्रो सामाजिक सञ्जाल त्यसमा पनि युट्युबहरुको । केहिदिन यता युट्युबमा एउटै व्यक्तिको विषयलाइ लिएर फरक–फरक शीर्षकमा सामग्रीको बर्षाद भैरहयो । मैले यहाँ ती सबै पात्रहरूको (पीडित महिला, महिला अधिकारकर्मी, नायक र केही युट्युब) को नाम उल्लेख गर्न उचित ठानिन् ।
पहिलो दिन युट्युबमा आयो चर्चित नायक…..सँग तिन बर्ष देखि बस्दै आएकि पीडित महिला रुदै मिडियामा । त्यसपछि असारे बर्षा झैं निरन्तर युट्युबमा त्यसै विषयको मात्र बर्षा भइरहयो । सुरुको दिन फलानो नायकले म सँग तिन बर्ष सँगै बसेर अहिले मलाई एकलो बनायो भनदै रुदै मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएकि उनि निरन्तर अन्तर्वार्तामा आइरहिन र एकाएक भाइरल बनिन् ।
पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दिन हुँदै हप्ता दिनसम्म यसले चर्चा बटुल्दै युट्युबको ट्रेनिङ कब्जा गर्यो । पहिलो दिनमा एक्लै आएकि पीडित बताउने महिला त्यसपछिका दिनमा महिलाअधिकारकर्मी बताउने महिलासँग देखा परिन । पीडित बताउने महिलाले आफूलाई न्याय चाहिएको आफू पीडामा परेको चित्कार गर्छिन भने महिलाअधिकारकर्मी बताउने महिलालले पीडित महिलाको पक्षमा बोल्दै न्यायको लागि लड्ने अभिब्यक्ति दिन्छिन । सोहि अन्तर्वातामा महिला अधीकारकर्मी बताउने महिलाले पीडित महिला अन्यायमा परेको जसरी हुन्छ । उनिसँग नाम जोडिएका नायकले नै उनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछिन भने पीडित महिलाले सँगै बस्दाका सबैकुरा छताछुल्ल पार्छिन ।
त्यसको अर्कोदिन उनै पीडित बताउने महिला, महिलाअधिकारकर्मी बताउने महिला र नाम जोडिएका नायक एउटै फ्रेममा बस्छन् र एक–अर्काको पोल खोलाखोल गर्छन । पोल खोल्दै जादाँ बिचबिचमा महिला अधिकारकर्मी बताउने महिला पनि बोल्छिन र उनले जसरी हुन्छ सहमति गर्न पहल गर्ने खालको अभिब्यक्ति दिन्छिन । त्यसदिन पनि अन्तर्वाता त्यहि सकिन्छ । अर्कोदिन फेरी तिनै जनाको अन्तवार्ता आउन्छ त्यहाँपनि पीडित महिला र उनिसँगै बस्ने नायक भनाभन गर्छन र अन्तिममा नायकले भनेका हुन्छन अब २ बर्ष मलाई समय दिनुहोस् त्यसपछि बिहे गर्नु परे गरौला । त्यहाँपनि महिलाअधिकारकर्मी बताउने महिलाले बिहे गरेर बस्नुपर्ने खालको अभिव्यक्ति दिइरहेकि हुन्छिन् ।
अघिल्लो दिनको भोलिपल्ट फेरी तिनै युट्युबहरूमा मुटुनै काप्ने खालको शीर्षक राखेर समाचार आउन्छ । पीडित महिलालाई बिहेको लागि मन्दिर बोलाएर कहाँ भागे नायक ? हेर्नुहोस् फलानो नायकको पेटमा बच्चा बोकेर मन्दिरमा बिहेको लागि पीडित महिला, खालि सिँउदो लिएर घर फर्किन उनि । यस्ता खालका शीर्षकमा सामग्री आएपछि खोलेर हेरियो । भिडियोमा पीडित महिलाले भाव विहल भएर चित्कार गरेको देखिन्छ । क्यामेरा तेर्साएर फोन गर्नुस् किन आएनन बेहुला भन्दै प्रश्न गरिन्छ र उनले गाडिमा होलान भन्छिन् भने समय घर्किदै गएपछि डाको छोडेर रोएको राम्रो अभिनय पनि गर्छिन । मन्दिरमा भएका सर्वसाधारणले उनलाई हरेस नखान र प्रहरी प्रसासनमा जान सुझाएका थिए ।
त्यसको साँझ उनै महिलाको अन्तर्वार्ता लिइन्छ र सोधिन्छ तपाई बेहुलि बन्न लगाएर बेहुला किन आएनन् ? उनले भन्छिन म दलित भएकै कारण बेहुला नआएका हुन । ३ बर्ष सँगै बस्दा उनले कहिल्यै जातको कुरा गरेनन् बिहेको कुरा गरेपछि यसो गरे यो बाहेक अरु केही कारण छैन आदी इत्यादी ।
त्यसको भोलिपल्ट विभिन्न अनलाइनमा अन्तर्वाता आयो पीडित युवतीको भनाइहरु निरन्तर आएपछि पर्सिपल्ट नायक बेहोस भएको र आत्महत्याको प्रयास गरेको सम्मको कुरा आयो । एक युट्युब च्यानलले नायकलाई जुन अस्पताल लग्छन महिलालाई पनि सोहि अस्पताल लगेर चेकजाँच गर्न लगाउन्छन् ।
त्यसको भोलिपल्ट पीडित भनिने महिला र नायक सँगै अन्तर्वाता दिन्छन् । त्यसपछि घटनाले अरु मोड लियो । हिजोसम्म म माथि नायकले शोषण गर्यो भन्ने महिलाको उक्त अनतर्वार्ता फरक कुरा गर्छिन । हिजो न्यायको सहारा लिएकि महिलाअधिकारधारीलेनै बिहेको प्रपञ्च रचेको देखि पैसाको लागि त्यस्तो गर्न लगाएको उनैले भन्छिन् ।
१० लाख आउन्छ ८ लाख तिमि राख्नु २ लाख मलाइ भनेर महिला अधिकारकर्मीले भनेको पीडित बताउने महिलाले भन्छिन् । त्यसपछि भने उनिहरु एक अर्कोलाई पर्दा सधै सहयोग गर्ने कुरा बताउँछन् । नायकले त्यहि अन्तर्वातामा मलाई बर्वाद पार्नेलाई म छाड्दिन थुक्क तपाइको अधिकारकर्मी भन्दै थुक्छन भने खुल्ला रुपमा आउन चुनौति पनि दिन्छन ।
अर्कोदिन डलरको लागि तिनै युट्यबहरु महिलाअधिकारकर्मीकोमा पुग्छन र पालै पालो प्रश्न गर्छन । ती अधिकारकर्मीले आफुमाथि निरन्तर वकालत गर्दै पीडित महिलाले नै षडयन्त्र गरेको भन्दै अन्तर्वाता दिन्छिन । त्यसैदिन हेडलाइन नेपाल नामक युट्युब च्यानलमा “किशोर खतिवडाले ल्याए आफु जस्तै पिडित हेडलाईन विशेषमा, सृजना वाग्लेको समुहले यसरी खाएको रहेछ १३ लाख” शीर्षक दिइयो त्यसपछि घटनाले झन उग्ररुप लियो ।
त्यसपछि एकाएक आरोप प्रत्यारोपमा दुवै पक्ष उत्रियो अन्ततः “लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै सृजना वाग्ले सहितको समुहले लक्ष्मी गदालमाथि गर्यो भौतिक आक्रमण, ढोका फोडियो”भनेर भिडियो आयो भिडियोमा महिला अधीकारधारीले हेल्मेट लगाएर घर तोडफोड गर्दे गालि गरेको र पीडित बताउने महिलाले पनि मुख छोड्दै हात हालेको देख्न सकिन्छ ।
त्यसपछि साझँ अर्को “वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्कीले खोले मुख, सृजना वाग्लेलाई यतिसम्मको कानूनी सजाए हुनसक्ने” भनेर भिडियो आयो । अब भन्नुहोस् यो घटनालाई के भन्ने ? एउटा महिला अधिकारकर्मीधारीले अर्कि महिलालाई घरमै गएर कालोमोसो दलिनन् कस्तो समाजको परिकल्पना गर्न सहिएला ? खुलेआम मैले सार्वजनिक रुपमै कालोमोसो लगाइदिए यस्तालाई देशबाटै बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने र आफु अधिकारर्मी बताउनेलाई के भन्ने ?
पटक–पटक मिडियामा आउने आफूले गरेको गल्तिहरुको पर्दाफास आफै गर्ने न्याय माग्न गुहार्ने अनि फेरी मलाई सिकाइयो भनेर भन्ने पीडित महिला बताउनेले बोलेका अपाच्य शब्दहरुलाई हेर्दा उनलाई कस्तो सजाय दिने ?
अनि आफ्नो सन्तुष्टिको लागि महिलासँगै बस्नेखाने मन नमिलेसि लाखापाखा लाग्ने नायक बताउने पुरुषलाई कस्तो सजाए हुने ? यो देशको कानुनले गर्ला । अनि अर्कोको निजी जविनमा पसेर निरन्तर खबर ब्रेक गर्दे समाजमा विकृति फैलाउने केही युबट्युबधारीलाय के को संज्ञा दिने ?
त्यसैले यी र यस्ता सबै समाजका खतरनाक भाइरस त हैनन ? गल्ती त्यस घटनासँग सम्बन्धित सबैपक्षको होला । त्यसैले त कानुन प्रशासन चाहिँएको कानुनी राज्यको धज्जि उडाउनी अधिकार कसैलाई नहोला । दोषिलाई हदैसम्मको कारबाही होस् ।
२२ वैशाख २०७८, बुधवार ११:२६ बजे प्रकाशित